सेमील्ट विशेषज्ञ: Google Analytics मा Subdomains को फ़िल्टर गर्न को लागि एक दिशानिर्देश
यी दिनहरू, यो Google Analytics मा कस्टम फिल्टर र उप-डोमेन सेट अप गर्नु आवश्यक छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटको यातायात र यसको स्रोतको विश्लेषण, मूल्यांकन र अवलोकन गर्न दिनेछ। चाहे तपाईंसँग ब्लग, एक कम्पनी वेबसाइट, धेरै ल्यान्डिङ पेजहरू वा सम्बद्ध साइट हो, यो उप-डोमेनहरू फिल्टर गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
यहाँ एन्ड्रयू Dyhan, सेल्टल्ट को अग्रणी विशेषज्ञहरु मध्ये एक छ यस सन्दर्भ मा केहि आसान सुझावहरु को बारे मा।
Google Analytics सेट अप गर्नुहोस्
पहिलो चरण तपाईंको उप-डोमेनमा Google एनालाइटिक्स सेट अप गर्दै छ। तपाईले तिनीहरूको लागि उही वा फरक UA कोडहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई तपाइँको कम्प्युटरमा कहीं पनि बचत गर्नु पर्दछ। यो सरल लाग्न सक्छ, तर तपाईंले सम्झनु पर्छ कि सबै वेबसाइटहरू एउटै UA गुणहरू प्रयोग गर्दैनन्। तपाईंले विभिन्न उप-डोमेनहरूको लागि फरक फिल्टरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ र निश्चित गर्नुहोस् कि कोडहरू सही रूपमा सम्मिलित हुन्छन्।
Google Analytics मा नयाँ दृश्य सिर्जना गर्नुहोस्
अर्को, तपाईलाई Google एनालिटिक्समा नयाँ अवलोकनहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। एकपटक तपाईंले आफ्नो Google एनालिटिक्स खाता खोल्नु भयो र तपाईंको ड्याशबोर्डमा जानुभयो, तपाइँ प्रशासक मेनु अवस्थित रहेको शीर्ष-दायाँ कुनामा सेटिङ्हरू समायोजन गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँ सम्भव छ कि धेरै डोमेनहरू सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँलाई सम्झनुको मात्र एक चीज हो कि तपाई विभिन्न वेबसाइटहरूको लागि विभिन्न फिल्टर चयन गर्नुहोस् र हरेक साइट यहाँ सम्मिलित गरिएको नयाँ विचार सिर्जना गर्नुहोस्।.
टेस्ट दृश्यहरू सिर्जना गर्नुहोस्
यदि तपाईं Google एनालिटिक्समा नयाँ हुनुहुन्छ भने, हामी कुनै पनि समस्याबाट बच्नको लागि परीक्षा अवलोकनहरू सिर्जना गर्न सिफारिस गर्दछौं। प्रत्येक डोमेन र उप-डोमेनका लागि, तपाईले विभिन्न परीक्षण हेराइहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँले सबै गल्तीहरू रोक्न निश्चित गर्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईं आफ्नो कच्चा ट्राफिक डाटामा पहुँच पाउन कसरी जान्न सक्नुहुन्छ यो प्रक्रिया कसरी काम गर्दछ।
कस्टम फिल्टर लागू गर्नुहोस
तपाईंले नयाँ विचारहरू सिर्जना गर्नुभए पछि, अर्को चरण अनुकूल फिल्टरहरू प्रयोग गर्नु हो। यसको लागि, तपाईंले कस्टम फिल्टर सेक्शन चयन गर्नुपर्छ र रेडियो बटनमा जानुहोस्। त्यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र सुरू गर्न यहाँ आफ्नो उप-डोमेनहरू थप्नुहोस्। अनुकूलन फिल्टर थप्दै तपाईंलाई तपाईंको काम सही ढंगले गर्नको लागि सबैभन्दा व्यापक र अद्भुत तरिका हो।
रेफरल बहिष्करण सूचिहरू थप्नुहोस्
सन्दर्भ बहिष्करण सूचीहरू एक राम्रो विचार हो किनकि यसले तपाईंको उप-डोमेनहरू नकली र कम गुणस्तर ट्राफिक प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्दछ। यसको लागि, तपाईंले आफ्नो सम्पत्ति वा सबडोमेन चयन गर्नुपर्छ। एकपटक यो चयन गरिसकेपछि, तपाइँ ट्र्याकिङ जानकारी बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र पूर्ण रेफरल बहिष्करण सूची प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईं आफ्नो उप-डोमेन URL हरू र सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
सबडोमेन के हो र यो कसरी ट्रयाक गर्ने हो?
यदि तपाईं सँग केहि वेब पेजहरू छन् जसको URL www.abc Source .com वा अन्य चीज हो, यो तपाईंको सजिलोको सबडोडेहरू र तिनीहरूको संख्या सीमित छैन यो सजिलो छ। उप-डोमेन एक एकल डोमेन हो जुन तपाईंको मुख्य वेबसाइट अन्तर्गत सिर्जना गरिएको छ र कुनै पनि समय सक्रिय वा निष्क्रिय हुन सक्छ। प्रायः, यदि प्रयोगकर्ताहरू एक होस्टिङ सेवाबाट अर्कोमा जान्छ भने, तिनीहरूसँग एकै डोमेनमा राख्न सजिलो छ र यसले इन्टरनेटमा उनीहरूको सम्पूर्ण प्रतिष्ठालाई बिर्सन सक्दैन। साथै, तपाइँको उप-डोमेनलाई क्रेडिट गर्न सजिलो छ किनभने मुख्य डोमेन नाम तपाईंको तर्फबाट तिर्नेछ र भुक्तानी स्वचालित रूपमा तपाईंको क्रेडिट कार्ड वा तपाईंको PayPal बाट पठाइएको छ।